ငွေသား Buster မျှော်စင် | အကောင်းဆုံးလက်ငင်းဝင်းဂိမ်း | CoinFalls အွန်လိုင်းကာစီနို
ချက်ချင်းအနိုင်ရရှိဂိမ်းဝါသနာရှင်? ကျနော်တို့ရှိ အကောင်းဆုံးလက်ငင်းအနိုင်ရရှိဂိမ်း မင်းအတွက်. အဆိုပါ IWG ဂိမ်းဆော့ဖျဝဲ developer များအနေဖြင့်ငွေသား Buster Towers အချို့တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ features တွေနှင့်အတူထုပ်ပိုးနေသည်. ဒါဟာအပေါငျးတို့သ reels spinning နှင့်တာဝါတိုင်ပေါ်မှပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုဖျက်ဆီးအကြောင်း. တချို့ကတကယ်တော်တော်လေးအရောင်များကိုဒီဂိမ်းရဲ့ interface ကိုဒီဇိုင်းအတွက်အသုံးပြုပြီ. ဒါကမူလငွေ Buster ဂိမ်းဖို့ဆက်ခံဖြစ်ပါသည်. ဤ အကောင်းဆုံးလက်ငင်းအနိုင်ရ ဂိမ်း အထိ£ 1,000,000 တစ်ဦးငွေသားဆုရှိပါတယ်. ထို့အပြင်ကစားသမားအားပေးပြီးမှအချို့သောအံ့သြဖွယ်ဆုကြေးငွေဂိမ်းရှိပါတယ်. နောက်ခံဂီတကဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်း၏အသွင်အပြင်အတိုင်းပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်.
ငွေသား Buster Towers အင်္ဂါရပ်များ အကောင်းဆုံးလက်ငင်းအနိုင်ရရှိဂိမ်း
ဤ အကောင်းဆုံးလက်ငင်းဝင်းဂိမ်း အချို့ကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ features တွေရှိပြီးကမှာအားလုံးရှုပ်ထွေးနားလည်ရန်မဖြစ်. ထိုသို့မြေတပြင်လုံးသည်အလှည့်ဖျားအတွက် busted တဲ့စောင့်ရှောက်သောကွဲပြားခြားနားသောအရောင်လုပ်ကွက်များ၏တာဝါတိုင်ကိုဗဟိုပြု. ပြဇာတ်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော Modes သာရှိပါတယ်. အဆိုပါမျက်နှာပြင်လှည့်ဖျားခလုတ်ကိုနှင့်စာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းအပေါ်လှည့်ခြင်းများ၏နံပါတ်ရှိပါတယ်. ဗဟိုမှာ, အဆိုပါလုပ်ကွက်များအသီးသီးတို့ကိုသူတို့အထိပ်ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆုပမာဏကိုရှိခြင်းနှင့်အတူရှိပါတယ်. ညာဘက်ခြမ်းတွင်ကောက်ယူကြယ်နဲ့မြှား၏နံပါတ်ပြသသောစားပွဲပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်. သင်ကကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကစားနည်းညှိနိုင်ပါတယ် + နှင့် – မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိခလုတ်.
အပြင်ဒီကနေ, the slot offers some special symbols as well. စည်းစိမ်ဥစ္စာလိုဂို၏ဘဝအသက်တာသူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကြောင့် slot ကဂိမ်း၏ရိုင်းသင်္ကေတဟုခေါ်သည်. ဒါဟာဂြိုဟ်ကြဲဖြန့် မှလွဲ. ရှိသမျှတို့သည်သင်္ကေတအဘို့အ 2x နှင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့်မဆိုအနိုင်ရများပြားနိုင်ပါတယ်. ကဒ်အထိုင်များ၏ကြဲဖြန့်သင်္ကေတဟာ reels ကျော် stacked ဖြစ်ပါတယ်.
ဒီ၏ဂိမ်း အကောင်းဆုံးလက်ငင်းဝင်းဂိမ်း ဒါကြောင့်ပေါ်လာသည်ထက်အများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်. သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည် reels လည်နှင့် reels ပေါ်သောအရေအတွက်တာဝါတိုင်ကနေလုပ်ကွက်၏အရေအတွက်ကိုဖျက်ဆီးမည်ဖြစ်ပါသည်. တစ်ပုံမှန် Play စနှင့်ထပ် Play ဂိမ်း Modes သာရှိပါတယ်. ပုံမှန်ကစား mode မှာ, သငျသညျပေးထားကြသည်5တစ်ဦးချင်းစီလောင်းနှင့်နံပါတ်များကိုကနေအဘို့အ spins 1-6 အဆိုပါတာဝါတိုင်အောက်ကလိပ်ပေါ်တွင်ပြသနေကြသည်. သုံးအထူးသင်္ကေတများရှိပါသည်; ကြယ်, စက်ဝိုင်းနှင့်မြှားသင်္ကေတ. သငျသညျ 4-ကြယ်ပွင့်သင်္ကေတအရဆိုပါက, ကကြယ်ပွင့်ဆုကြေးငွေဂိမ်းမြှင့်လုပ်ဆောင်. အဆိုပါမြှားသင်္ကေတတစ်ကြိမ်ထပ်တပြင်လုံးကိုမျှော်စင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု refills နှင့်သင်စုဆောင်းမယ်ဆိုရင်4ဤအရာ, မြှားဆုကြေးငွေဂိမ်းအစပျိုးနေသည်. စက်ဝိုင်းသင်္ကေတစက်ဝိုင်းဆုကြေးငွေစားပွဲပေါ်တွင်အစိတ်အပိုင်းများဖြည့်အပေါ်စောင့်ရှောက်.
သင်ကပုံမှန် Play စ mode မှာဘာမှအနိုင်ရပြီမဟုတ်လျှင်သင်ကရဲ့အဆုံးမှာအခမဲ့လှည့်ဖျားသည့်ထပ်ကစားအင်္ဂါရပ်ကိုခေါ်ပေးတော်မူလတံ့. ကြောင်းလှည့်ဖျားတွင် reels ပုံမှန်ကစားအင်္ဂါရပ်များကဲ့သို့တူညီသောအရာတို့ကိုပြသပါလိမ့်မယ်; i-6 ဂဏန်း, ကြယ်သင်္ကေတ, မြှားသင်္ကေတတစ်ခုသို့မဟုတ်စက်ဝိုင်းသင်္ကေတသို့မဟုတ်တစ်ချက်ချင်းဆုငွေပမာဏ.
ဤ အကောင်းဆုံးလက်ငင်းဝင်းဂိမ်း အချို့ကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်တစ်ဦးဖြစ်မည်နောက်ခံအသံကရှိပါတယ်. အဆိုပါဂိမ်းဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာချိတ်ဆက်ကစားသမားကိုစောင့်ရှောက်ရန်သေချာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါဆုကြေးငွေသင်္ကေတများခြေရင်းဂိမ်း၏အနိုင်ရရှိတဲ့ထံမှဆိတ်ကွယ်ရာအချို့အပိုငွေသားဖြစ်စေမယ့်အကြီးအလမ်းရှိပါတယ်.